China 45m Telecom Tower Manufacture kunye Factory |XY Tower
I-XYTOWER ngumvelisi wenqaba yentsimbi yobuchwephesha e-China, Sibonelela ngeyona nkonzo yentsimbi enobuchwephesha yokumisa enye yokuthumela kumazwe angaphandle kolwandle, ingakumbi kwimveliso yenqaba yonxibelelwano.
Nayiphi na ingxaki Nceda Usazise!
Igama lemveliso:45m Telecommunication Tower
Umgangatho weWelding:I-AWS D 1.1
Unyango lomphezulu:Eshushu Dipped Galvanized
umenzi weenqaba zentsimbi kunye nomthengisi ngaphandle
I-XYTOWER yinkampani egxile ekwenzeni iintlobo ngeentlobo zezakhiwo zentsimbi eziquka iLattice Angle Tower, iSteel Tube Tower, iSubstation Structure, iTelecommunication Tower, iRoofTop Tower, kunye ne-Power Transmission Bracket esetyenziselwa iintambo zothumelo ukuya kuthi ga kwi-500kV.
I-XYTOWER igxininise kwimveliso yeenqaba zentsimbi ezishushu zediphu iminyaka eli-14, zinemizi-mveliso kunye nemigca yemveliso, enemveliso yonyaka yeetoni ezingama-30000, umthamo owaneleyo wokubonelela kunye namava atyebileyo okuthumela ngaphandle!
Inkampani inokuyila iinqaba zothumelo ezahlukeneyo kunye neenqaba ze-telecom ngokwemigangatho.Inqaba yensimbi ye-lattice eyilwe kwaye iqhutywe yinkampani iphumelele uvavanyo lohlobo (uvavanyo lomthwalo wesakhiwo senqaba) ye-China Research Institute ngexesha elinye.
Injongo yethu kukuzama ukubonelela abathengi ngeemveliso kunye neenkonzo ezanelisayo !!
1. Umthengisi ogunyazisiweyo ePakistan, eYiputa, eTajikistan, ePoland, ePanama nakwamanye amazwe;
Umnikezeli weSatifikethi seGridi yaMandla eTshayina, unokukhetha ngokukhuselekileyo kunye nokusebenzisana;
2. Umzi-mveliso ugqibe amashumi amawaka eemeko zeprojekthi ukuza kuthi ga ngoku, ukuze sibe nobutyebi bogcino zobugcisa;
3. Ukuququzelela inkxaso kunye neendleko eziphantsi zabasebenzi zenza ixabiso lemveliso libe neenzuzo ezinkulu kwihlabathi.
4. Ngomzobo oqolileyo kunye neqela lomzobo, unokuqiniseka ngokukhetha kwakho.
5. Inkqubo yokulawula umgangatho ongqongqo kunye nobuninzi bogcino bobugcisa buye benza iimveliso ezikumgangatho wehlabathi.
6. Asiyena kuphela abavelisi kunye nababoneleli, kodwa kunye namaqabane akho kunye nenkxaso yobugcisa.
Iindidi zeenqaba zothumelo
Kwiinqaba ze-telecom kwiimeko ezahlukeneyo, wamkelekile ukuba uze kudliwano-ndlebe olulungiselelweyo, iqela loyilo lobuchwephesha kunye nenkonzo yokumisa enye inikezelwe!
Sifuna abathengi ukuba banikeze ezi parameters zilandelayo:isantya somoya, ukuphakama, inombolo ye-eriyali, indawo ye-eriyali
35m Inqaba yothungelwano lweAngular
Idiphu eshushu ifakwe igalvanized
Umaleko ophakathi ubukhulu 86um
Ngaphezu kweminyaka engama-30
Imigangatho yempahla ekrwada
I-GB/T700-2006, ISO630-1995, GB/T1591-2018;GB/T706-2016;
Yila isantya somoya
30M/S (iyahluka ngokwemimandla)
5mm-7mm: (iyahluka ngokwemimandla)
Ukuthe nkqo kulahlekile
Izinto eziphathekayo - iAngle Steel
Ukuze siqinisekise umgangatho wemveliso, siqala ekuthengeni izinto ekrwada.Kwizinto eziluhlaza, i-angle yentsimbi kunye nemibhobho yensimbi efunekayo ekuqhutyweni kwemveliso, imveliso yethu ithenga iimveliso zeefektri ezinkulu ezinomgangatho othembekileyo kulo lonke ilizwe.Umzi-mveliso wethu ukwafuna ukuhlola umgangatho wemathiriyeli ekrwada ukuqinisekisa ukuba umgangatho wemathiriyeli ekrwada kufuneka uhambelane nemigangatho yelizwe kwaye ube nesiqinisekiso sokuqala somzi-mveliso kunye nengxelo yokuhlolwa.
INdibano kunye noVavanyo lweeNqaba zeNsimbi
Emva kokuba ukuveliswa kwenqaba yentsimbi kugqityiwe, ukuze kuqinisekiswe umgangatho wenqaba yensimbi, umhloli womgangatho uya kuqhuba uvavanyo lwendibano kuyo, alawule ngokungqongqo umgangatho, alawule ngokungqongqo iinkqubo zokuhlola kunye nemigangatho, kwaye ahlole ngokungqongqo ubungakanani bomatshini. kunye nokuchaneka komatshini ngokwemimiselo yencwadana yomgangatho, ukwenzela ukuba kuqinisekiswe ukuba ukuchaneka komatshini wamacandelo ahlangabezana neemfuno eziqhelekileyo.
Ezinye Iinkonzo:1 Umthengi unokuphathisa umbutho wokuvavanya umntu wesithathu ukuba avavanye inqaba.2 Kunokubonelelwa ngendawo yokuhlala kubathengi abeze kumzi-mveliso ukuza kuhlola inqaba.
Indibano yenqaba yombane yaseMyanmar
Indibano yenqaba yocingo yase-East Timor
Indibano yenqaba yombane yaseNicaragua
Inqaba yentsimbi edibeneyo
Emva kokuhlanganisa kunye novavanyo, inyathelo elilandelayo liya kwenziwa:idiphu eshushu igalela, ejolise kubuhle, ukuthintela umhlwa kunye nokwandisa ubomi benkonzo yenqaba yensimbi.
Inkampani ineplanti eyakhe yokutshiza, iqela lobuchwephesha lokutshiza, abafundisi-ntsapho abanamava okukhokela, kunye nokusetyenzwa ngokungqongqo ngokungqinelana ne-ISO1461 yomgangatho wokuthantamisa.
Oku kulandelayo ziiparameters zethu zokuqinisa ireferensi:
Umgangatho wegalati: ISO:1461
Ukutyeba kwe-zinc yokwambathisa
Umgangatho kunye nemfuneko ≧86μm
Amandla okubambelela Ukonakala nguCuSo4
Idyasi yeZinc ayinakuhluthwa kwaye iphakanyiswe ngehamile 4 amaxesha
Emva koGalvanization, siqala ukupakisha, Yonke into yeemveliso zethu inekhowudi ngokweenkcukacha zomzobo.Yonke ikhowudi iya kufakwa isitywina sentsimbi kwisiqwenga ngasinye.Ngokwekhowudi, abathengi baya kukwazi ngokucacileyo ukuba isiqwenga esinye singoluphi uhlobo kunye namacandelo.
Zonke iziqwenga zibalwe ngokufanelekileyo kwaye zipakishwe ngomzobo onokuqinisekisa ukuba akukho siqwenga esinye esilahlekileyo kwaye kulula ukufakwa.
Ukufumana iikowuteshini zobuchwephesha, nceda usithumelele i-imeyile okanye uthumele iphepha elilandelayo, siya kuqhagamshelana nawe kwiiyure ze-24 kwaye pls khangela ibhokisi yakho ye-imeyile.
Wamkelekile ngokufudumeleyo ukuQhagamshelana nathi!
Sinikezela ngeyona nkonzo yentsimbi yokumisa intsimbi yokuthumela kumazwe angaphandle, ingakumbi kwimveliso yombane yokuhambisa umbane, imveliso yonxibelelwano ngomnxeba,
substation steel isakhiwo Isebenza.
⦁ Zonke iintlobo ze-telecom tower yoyilo olulungelelanisiweyo lunokubonelelwa
⦁ Iqela lakho loyilo lobuchwephesha kwiiprojekthi zeenqaba zentsimbi zaphesheya
Ngaphambili: Telecom Communication Steel Structure Tower
Okulandelayo: 60m yeAngular Steel Microwave Antenna Telecom Tower